नेदरल्याण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय आईसीटी वकिलहरू - Law & More
इन्टरनेटको आविष्कारको परिणाम स्वरूप धेरै कानुनी प्रश्न खडा भएको छ। यो ICT कानूनको स्थापना पछि भएको थियो। ICT कानूनसँग कानूनको अन्य क्षेत्रहरूसँग धेरै अन्तर्क्रिया हुन्छन्, जस्तै करार कानून, गोपनीयता कानून र बौद्धिक सम्पत्ति कानून। कानूनको यी सबै क्षेत्रहरूमा आईसीटी कानूनको बारेमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। यी प्रश्नहरू निम्न हुन सक्छन्: 'के मैले इन्टरनेटमा किनेको केही फर्काउन सम्भव छ?', 'इन्टरनेट प्रयोग गर्दा मेरा अधिकारहरू के हुन् र यी अधिकारहरूको सुरक्षा कसरी गरिन्छ?' र 'मेरो आफ्नै अनलाइन सामग्री प्रतिलिपि अधिकार कानून अन्तर्गत सुरक्षित छ?' यद्यपि आईसीटी कानून आफैंमा आईसीटी कानूनको विशिष्ट क्षेत्रहरुमा पनि बाँड्न सकिन्छ, जस्तै सफ्टवेयर कानून, सुरक्षा कानून र ई-वाणिज्य।
एक आईटीसी मालिकको आवश्यकता छ?
इन्टरनेटको आविष्कारको परिणाम स्वरूप धेरै कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।
> SAAS र क्लाउड
> IT करार
> सातत्य योजनाहरू र एस्क्रो
> होस्टिंग र कोलोकेसन
> सफ्टवेयर कानून
> खुला स्रोत सफ्टवेयर
> औद्योगिक सफ्टवेयर
यो ICT कानूनको स्थापना पछि भएको थियो। ICT कानूनसँग कानूनको अन्य क्षेत्रहरूसँग धेरै अन्तर्क्रिया हुन्छन्, जस्तै करार कानून, गोपनीयता कानून र बौद्धिक सम्पत्ति कानून। कानूनको यी सबै क्षेत्रहरूमा आईसीटी कानूनको बारेमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। यी प्रश्नहरू निम्न हुन सक्छन्: 'के मैले इन्टरनेटमा किनेको केही फर्काउन सम्भव छ?', 'इन्टरनेट प्रयोग गर्दा मेरा अधिकारहरू के हुन् र यी अधिकारहरूको सुरक्षा कसरी गरिन्छ?' र 'मेरो आफ्नै अनलाइन सामग्री प्रतिलिपि अधिकार कानून अन्तर्गत सुरक्षित छ?' यद्यपि आईसीटी कानून आफैंमा आईसीटी कानूनको विशिष्ट क्षेत्रहरुमा पनि बाँड्न सकिन्छ, जस्तै सफ्टवेयर कानून, सुरक्षा कानून र ई-वाणिज्य।
को टोली Law & More आईसीटी कानूनको सम्बन्धमा र कानूनको क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट ज्ञान छ जुन आईसीटी कानूनको साथ इन्टरफेस गर्दछ। तसर्थ, हाम्रो वकिलहरूले तपाईंलाई निम्न विषयहरूको बारेमा सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ:
Law सुरक्षा कानून;
A सा र क्लाउड;
• आईटी अनुबंधहरू;
U निरन्तरता व्यवस्था र एस्क्रो;
Sh वेबशप कानून;
Co होस्टिंग को-स्थान;
• सफ्टवेयर कानून;
Source खुला स्रोत सफ्टवेयर;
• औद्योगिक सफ्टवेयर।
सुरक्षा कानून कानूनको क्षेत्र हो जुन जानकारीको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। विषयहरू जुन कानूनको यस क्षेत्रमा अनौंठो छैनन् कम्प्युटर भाइरस, कम्प्युटर घुसपैठ, ह्याकि and र डाटाको अवरोध समावेश गर्दछ। संवेदनशील र गोप्य जानकारी सुरक्षित राख्न, सम्भाव्य उपायहरूको पूर्ण सेट छ। उदाहरण को लागी, कम्पनीहरु आफैं प्राय: जोखिम विश्लेषणको आधारमा गैर कानूनी उपायहरु प्रयोग गर्छन्। यद्यपि यो सुरक्षाको कानूनी आधार पनि छ। जे भए पनि, यो ती विधायिका हो जसले निर्धारण गर्दछ कि यी सुरक्षा उपायहरू कत्तिको कडा हुनुपर्दछ।
जब विधायकीय उपायहरूको बारेमा सोच्न सकिन्छ कसैले पनि 'Wet bescherming persoonsgegevens' (व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐन) को बारे सोच्न सक्छ। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐन भन्छ कि यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि घाटा वा अवैध प्रक्रियाको बिरूद्ध व्यक्तिगत डेटाको रक्षा गर्न के उपायहरू गरिएको छ। यो सर्वर र आगन्तुक बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन शामिल हुन सक्छ: SSL कनेक्शन। पासवर्डहरू पनि त्यस्ता सुरक्षाको भाग हुन्।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐनको अलावा, केहि कार्यहरू पनि अपराधिक हुन्छन्। ह्याकिking डच फौजदारी संहिताको धारा १२128ab को आधारमा दण्डनीय छ।
तपाइँको जानकारी को सुरक्षा गर्न, यो जान्न महत्वपूर्ण छ कि कसरी सुरक्षा सुरक्षा कार्य गर्दछ र कसरी तपाइँको आफ्नै र अरू कसैको डेटा लाई सुरक्षित तरिकामा सुरक्षाको रूपमा। Law & More सूचना सुरक्षाको कानूनी पक्षहरुमा सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ।
SAAS र क्लाउड
सफ्टवेयर एक सेवाको रूपमा, वा सास, सफ्टवेयर हो जुन सेवाको रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ। यस्तो सेवाको लागि, प्रयोगकर्ताले सफ्टवेयर खरीद गर्न आवश्यक पर्दैन, तर इन्टर्नेटमा सास पहुँच गर्न सक्दछ। सास सेवाहरूको फाइदा यो हो कि प्रयोगकर्ताका लागि लागतहरू अपेक्षाकृत कम हुन्छन्।
एक SaaS सेवा ड्रपबक्स एक क्लाउड सेवा हो। क्लाउड सेवा एक नेटवर्क हो जहाँ जानकारी क्लाउडमा भण्डारण हुन्छ। प्रयोगकर्ता क्लाउडको मालिक होइन र यसैले यसको मर्मतका लागि जिम्मेवार छैन। क्लाउड प्रदायक क्लाउडको लागि जिम्मेवार छ। क्लाउड सेवाहरू पनि केहि नियमहरूमा बाध्य छन्, जुन मुख्यत: गोपनीयता-सम्बन्धित नियमहरू हुन्।
Law & More तपाइँको सास र क्लाउड सेवामा सल्लाह दिन सक्छ। हाम्रो वकिलहरूले कानूनको यस क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव लिन्छन्, परिणाम स्वरूप उनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको सबै प्रश्नहरूको मद्दत गर्न सक्दछन्।
हाम्रो डिजिटल विश्वको परिणाम स्वरूप, धेरै कम्पनीहरू सूचना प्रविधिको उचित काममा निर्भर भएका छन्। यस विकासको कारण, यो केहि बढि महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ आईटीको विषयहरू व्यवस्थित राख्नु। उदाहरण को लागी, हार्डवेयर वा सफ्टवेयर इजाजतपत्र को खरीद को लागी, एक IT अनुबंध बनाउनु पर्छ।
आईटी करारहरू, नामले सुझाव दिए जस्तै "नियमित" सम्झौताहरू भन्दा कम केहि छैन सामान्य खरीद शर्तहरू, गोपनीयता कथन, रोजगार सम्झौताहरू, सफ्टवेयर सम्झौताहरू, सास सम्झौताहरू, क्लाउड सम्झौताहरू र एस्क्रो सम्झौताहरू। यस्तो सम्झौतामा सम्झौताहरू बनाइन्छ, उदाहरणका लागि मूल्य, वारेन्टी वा देयता राम्रो वा सेवाको सम्बन्धमा।
आईटी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्दा वा पालना गर्दा समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यहाँ, उदाहरण को लागी, के वितरित गरिनु पर्छ को बारे मा अनिश्चित हुन सक्छ वा कुन विशेष सर्तहरू अन्तर्गत। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ र यी प्रबन्धहरू सम्झौतामा कागजात गरिएको छ।
Law & More तपाइँका सबै आईटी करारहरूमा तपाइँलाई सल्लाह दिन सक्छ। हामी तपाईंको अवस्थाको मूल्या assess्कन गर्नेछौं र तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न ध्वनि गुणस्तरको अनुकूलित सम्झौता मस्यौदा गर्न सक्छौं।
सातत्य योजनाहरू र एस्क्रो
सूचना प्रविधि को प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरू निश्चित हुन सक्छन् कि उनीहरूको सफ्टवेयर र डाटा प्रयोग हुन सक्छ। एक निरन्तरता योजना एक समाधान प्रदान गर्न सक्छ। यस्तो निरन्तरता योजना आईटी सेवा प्रदायकको सहयोगमा समाप्त हुन्छ। यसको मतलब यो छ कि उदाहरणको लागि दिवालियापनको लागि आईटी सेवाहरू जारी राख्न सकिन्छ।
एक निरन्तरता योजना को स्थापना को उद्देश्य को लागी, आईटी सेवा को प्रकार को लागी आवश्यक छ। कहिलेकाँही स्रोत कोड एस्क्रो योजना पर्याप्त हुन्छ, जबकि अन्य केसहरूमा थप व्यवस्थाहरू आवश्यक हुन्छ। क्लाउडको निरन्तरताको मामलामा उदाहरणका लागि दुबै आपूर्तिकर्ता र होस्टिंग प्रदायकहरूलाई दिमागमा राख्नु पर्छ।
एक निरंतरता योजना तपाईको डेटा कायम राख्नको लागि आवश्यक छ। Law & More निरन्तरता योजनाहरुमा सल्लाह दिन सक्छ। हामी तपाईंको सफ्टवेयर र डाटा सुरक्षित गर्न तपाईंलाई यस्तो योजना मस्यौदा मद्दत गर्न सक्दछौं।
वेबशपहरूले कानूनी फ्रेमवर्कको एक ठूलो संख्याको साथ व्यवहार गर्दैछ जुन उनीहरूको पालना गर्न आवश्यक छ। दूरी खरीद, उपभोक्ता अधिकार, कुकी कानून, यूरोपियन निर्देश र अधिक कानूनी पक्ष हो जुनसँग वेबशपको सामना गर्नुपर्नेछ। शब्द 'वेब स्टोर कानून' यसको लागि एक सबै समावेशी शब्द प्रदान गर्दछ।
धेरै नियमहरूको कारण, यस्तो लाग्दछ कि तपाईंले कुनै समयमा "रूखहरूको लागि काठ देख्न सक्नुहुन्न"। के मैले नियम र सर्तहरू प्रयोग गर्नु पर्छ? कसरी ग्राहकले सम्झेर काम गर्दछ? मैले मेरो वेबसाइटमा कुन जानकारी प्रदान गर्नुपर्दछ? भुक्तानीको सम्बन्धमा त्यहाँ के नियमहरू छन्? कुकी कानूनको बारेमा के छ? मैले मेरो वेब स्टोरमार्फत प्राप्त गरेको व्यक्तिगत डाटालाई के गर्ने? यो प्रश्नहरूको चयन हो जुनसँग वेब स्टोरको मालिकसँग सामना गर्न सकिन्छ।
यी कुराहरु व्यवस्थित गर्नु महत्वपूर्ण छ। अन्यथा, तपाइँले जरिवाना लिन सक्नुहुन्छ। यो जरिवाना ठूलो उचाइमा पुग्न सक्छ र तपाइँको कम्पनी मा एक प्रभाव गर्न सक्छ। यी मामिलाहरूमा राम्रोसँग जानकारी दिनाले तपाईंको जोखिमहरूलाई कम गर्दछ।
Law & More प्रासंगिक कानूनको साथ तपाईंको पालनामा सल्लाह दिन सक्छ। यसका साथै कानूनी कागजातहरू मस्यौदा बनाउन हामी मद्दत गर्न सक्छौं जुन तपाईंको वेब स्टोरका लागि सान्दर्भिक छ।
होस्टिंग र कोलोकेसन
जब एक होस्ट गर्दछ वा वेबसाइट होस्ट गर्न इच्छा गर्दछ, एक लागू कानूनी प्रावधान दिमागमा राख्नु पर्छ। जब एक वेबसाइट होस्टिंग, डाटा भण्डारण हुनेछ र कहिलेकाँही पास पनि। यसैले यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ कसरी यो डेटा तपाइँको ग्राहक लाई हेर्न को लागी आवश्यक छ, तर तेस्रो पक्षहरु लाई पनि।
तपाइँसँग तपाइँको होस्टिंग र यसको कानुनी पक्षहरूको बारेमा स्पष्ट सर्तहरू हुनुपर्नेछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि ग्राहकहरूलाई उनीहरूको डेटासँग के हुन्छ भनेर थाहा छ। ग्राहकहरूले यो महत्त्वपूर्ण पाउँदछन् कि उनीहरूको डेटा सावधानीपूर्वक सुरक्षित गरिएको छ। डाटा नियमहरू भached्ग हुँदा को जिम्मेवार छ भनेर जान्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ।
के तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु को गोपनीयता को रक्षा गर्न आवश्यक छ? के तपाईंलाई सम्पर्क जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ यदि यो पुलिसले अनुरोध गरेको हो भने? के तपाइँ डेटा संरक्षण र डेटा उल्ल ?्घनको लागि जिम्मेदार हुनुहुन्छ? हाम्रो वकिलहरूले यी सबै र तपाईंको सबै अन्य प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छन्। हुनसक्छ तपाईंको कुनै प्रश्न छ, तपाईं जहिले पनि कुनै एक वकीललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ Law & More.
आजकल, यो सफ्टवेयर बिनाको संसारमा बस्न अकल्पनीय हुनेछ। सफ्टवेयर कानून दुबै सफ्टवेयर विकासकर्ता र सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
'Auteurswet' (प्रतिलिपि अधिकार ऐन) ले निर्दिष्ट गर्छ कि कसले केहि सफ्टवेयरको स्वामित्व राख्छ। अभ्यासमा, यद्यपि यो स्पष्ट हुँदैन कि कसले सफ्टवेयरको स्वामित्व राख्छ र यसैले प्रतिलिपि अधिकारको स्वामित्व राख्छ। सफ्टवेयर विकासकर्ताहरू जसले उनीहरूको उत्पादन बेच्छन, उनीहरूको प्रतिलिपि अधिकारहरू कायम राख्न चाहन्छन्। यसले सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नका लागि सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताहरूको सम्भावनाहरूलाई सीमित गर्दछ। यो अझ जटिल हुन्छ जब प्रयोगकर्ताले आफ्नै (सफ्टवेयर) सफ्टवेयर विकास गर्न चाहन्छ। त्यसो भए कसले प्रतिलिपि अधिकार पाउनेछ?
तपाईको जोखिम सीमित गर्न को लागी, यो निर्णय गर्नु महत्वपूर्ण छ कि कसले प्रतिलिपि अधिकार पाउनेछ। Law & More तपाईंलाई सफ्टवेयर कानूनमा सल्लाह दिन सक्छ र कानूनको यस क्षेत्रको सम्बन्धमा तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ।
खुला स्रोत सफ्टवेयर
खुला स्रोत सफ्टवेयरको मामलामा, प्रयोगकर्ताले सफ्टवेयरको स्रोत कोड प्राप्त गर्दछ जब इजाजत पत्र खरीद गर्दा। यसको लाभ यो छ कि प्रयोगकर्ताहरूले सफ्टवेयरलाई अनुकूलित र सुधार गर्न सक्दछन् ताकि सफ्टवेयरको विकास जारी रहनेछ। सिद्धान्त मा, यो पाठ्यक्रम को लागी लाभदायक र एकदम व्यावहारिक लाग्छ: जो कोहीसँग कोड को ज्ञान छ उसले खुला स्रोत सफ्टवेयर सम्पादन गर्न सक्दछ।
अभ्यासमा, तथापि, ओपन सोर्स सफ्टवेयरको उपयोगका लागि नियमहरू तोक्न र ओपन सोर्स सफ्टवेयरको प्रयोग स्पष्ट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो अझ महत्त्वपूर्ण छ अब थोरै पर्यवेक्षण भएको छ, जबकि खुला स्रोत सफ्टवेयर इजाजतपत्रको उल्ल .्घनका लागि धेरै दावीहरू पेश गरिएको छ।
Law & More खुला स्रोत सफ्टवेयरमा तपाईलाई सल्लाह दिन सक्छ। के तपाईं खुला स्रोत सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा तपाईंले विकास गर्नुभएको सफ्टवेयरको मालिक रहनुहुनेछ? कुन नियम र सर्तहरू तपाईं इजाजत पत्रको प्रयोगको लागि राख्न सक्नुहुन्छ? तपाइँ कसरी दावी पेश गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँको इजाजत पत्र उल्लंघन भएको छ? यो प्रश्न हो जुन हाम्रो एक वकीलले जवाफ दिन सक्छ।
सफ्टवेयर अफिसमा मात्र प्रयोग हुँदैन, तर उद्योगमा पनि। उत्पादनहरू र मेशिनहरू सफ्टवेयरको साथ सुसज्जित वा विकसित छन्। यो एम्बेडेड सफ्टवेयर मेशिन वा उत्पादनहरु लाई नियन्त्रण गर्न लेखिएको हो। त्यस्ता प्रकारका सफ्टवेयरका उदाहरणहरू मेशिन, ट्राफिक लाइट र कारहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
जसरी यो 'सामान्य' सफ्टवेयरको लागि महत्वपूर्ण छ, (औद्योगिक) सफ्टवेयर कानून औद्योगिक सफ्टवेयरको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ र दुबै सफ्टवेयर विकासकर्ता र सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताहरूका लागि आवश्यक नियमहरू प्रदान गर्दछ। औद्योगिक सफ्टवेयर उद्योगले धेरै लगानीहरू प्राप्त गर्दछ, जसले यसलाई प्रासंगिक प्रतिलिपि अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक बनाउँदछ।